musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Peru Kuvhuna Nhau » 32 vakaurawa, makumi maviri vakakuvara apo bhazi rinowira padombo muPeru
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tsaona dzemumigwagwa dzinowanzoitika muPeru nekuda kwevanomhanyisa mota, migwagwa isina kuchengetedzwa zvakanaka, kushayikwa kwemasaini emigwagwa uye kusachengetedzwa kwemigwagwa kwakashata.
Vazhinji vakaurayiwa mutsaona yebhazi reLima.
Highspeed yakapa njodzi yebhazi.
Vana vaviri pakati peavo vakaurayiwa mutsaona.
Sekureva kwevakuru vePeruvia, bhazi revatakuri vaitakura vafambi makumi matanhatu nenomwe vaive vadzika kubva padenga padyo neguta guru reLima.
Vanenge makumi matatu nevaviri vanhu vakaurayiwa uye vanopfuura makumi maviri vakakuvara mutsaona iyi. Vana vaviri - mukomana ane makore matanhatu ekuberekwa uye musikana ane makore matatu ekuberekwa - vaive vamwe vevaifamba vakafa.
Tsaona yaive yePeru yechitatu yakawanda-yekukuvara tsaona yekufambisa mumazuva mana.
Tsaona iyi yakaitika munzira yakatetepa yeCarretera Central mugwai makiromita makumi matanhatu (60 mamaira) kumabvazuva kweguta guru reLima. Mugwagwa unobatanidza Lima kune yakawanda yepakati Andes.
Vakuru vacho vari kuti "kushaya hanya" kwakakonzera tsaona, nekuti bhazi yanga ichifamba "nekumhanya kwazvo".
Sekureva kwenhoroondo dzevakapona, yakarova dombo ndokudzika mugomba rakadzika dzika mamita mazana maviri.
Svondo rapfuura, vanhu makumi maviri nevaviri vakafa apo zvikepe zviviri zvakarovera parwizi rweAmazon kuPeru. Nhamba isina kugadzwa inoramba isipo.
Mazuva maviri apfuura, rimwe bhazi rakawira mumupata kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika, ndokuuraya vanhu gumi nevanomwe.